Fanampin'ny Bokin'i Estera - Wikipedia
Ny fanampin'ny Bokin'i Estera na tovan'ny Bokin'i Estera dia tsy hita ao amin'ny ao amin'ny Baiboly protestanta na ao amin'ny Baiboly hebreo. Ny Bokin'i Estera ao amin'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa no ahitana ilay tovana. Tamin'ny teny grika ny sora-tanana ananana azy.
1 Tantaran'ilay tovana
2 Votoatin'ny fanampin'ny Bokin'i Estera
3 Ny fanampin'ny Bokin'i Estera sy ny Baiboly protestanta
Fantatr'i Hieronimo (na Jerôma) fa tsy hita ao amin'ny Baiboly hebreo ireo tovana ireo ka tany amin'ny faran'ny fandikan-teny nataony no nametrahany azy manomboka eo amin'ny Est. 10.4 hatrany amin'ny Est. 16.24. Mbola eo amin'io toerana nasiany azy io sy araka ny fametahana toko sy andininy nataony no hita koa ao amin'ny Baiboly katolika nadika avy amin'ny Volgata, toy ny Baiboly Douay-Rheims sy ny Baibolin'i Knox. Tamin'ny taona 1979 dia nanaovana fanitsiana ny Volgata ka natao hoe Volgata Vaovao izay ahitana ny fanampiny amin'ny Bokin'i Estera ao anatin'ny fitantarana fa tsy any amin'ny farany. Sahala amin'izany koa ny ankamaroan'ny dikan-tenin'ny Baiboly katolika amin'izao andro izao izay nalaina avy amin'ny dikan-teny fototra hebreo sy grika, ka miteraka fahasamihafana eo amin'ny fanisiana toko sy andininy amin'ny dikan-tenin'ny Baiboly samihafa.
Ny Volgata Vaovao dia mampiditra ireo tovana ireo ka mametraka toko sy andininy ho toy ny tohin'ny andininy eo aloha na manarakaraka (Estera 11.2-12 ao amin'ny Volgata tranainy nefa Estera 11.1a-1k ao amin'ny Volgata Vaovao). Ny dikan-teny sasany dia tsy mametraka tarehimarika fa mampiasa litera ho an'ireo toko sy andininy mifandraika amin'ireo tovana ireo (Estera 11.2-12.6 ao amin'ny Volgata, fa Estera A.1-17 kosa amin'ny dikan-teny sasany).
Votoatin'ny fanampin'ny Bokin'i EsteraHanova
Ao amin'ilay tovana dia ireto avy ny zavatra lazaina ao :
teny fanokafana manoritsoritra ny nofin'i Mordokea (na Mordekay);
ny votoatin'ny didy mampandringana ireo Jody (na Jiosy);
vavak'i Mordokea sy Estera amin'Andriamanitra izay mangataka azy mba hamaha olana;
antsipiriany momba ny nisehoan'i Estera teo anatrehan'ny mpanjaka Ahasoerosy sy ny firesahany ny amin’ny hamonjen'Andriamanitra ny mpiray tanindrazana aminy;
dika mitovin'ilay didy manavotra ny Jody;
andalana ahitana an'i Mordokea mivaofy ilay nofiny tao amin'ny teny fanokafana mialoha ny tena hitrangan-javatra;
teny famaranana manazava ny nanaovana dikan-teny ny Bokin'i Estera.
Ny fanampin'ny Bokin'i Estera sy ny Baiboly protestantaHanova
Ao amin'ny Baiboly protestanta sasany ankehitriny, ireo andininy ireo dia misaraka amin'ny Bokin'i Estera ka tafiditra ao amin'ireo atao hoe boky apokrifan'ny Testamenta Taloha, fa ao amin'ny ankamaroan'ny Baiboly katolikaankehitriny kosa dia mitambatra ao amin'ny Bokin'i Estera izy ireo nefa atao hoe deoterokanonika. Ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy dia tsy ahitana io tovana io.
Fanampiny amin'ny Bokin'i Daniela
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanampin%27ny_Bokin%27i_Estera&oldid=1013194"
Dernière modification le 1 Aogositra 2021, à 10:56
Voaova farany tamin'ny 1 Aogositra 2021 amin'ny 10:56 ity pejy ity.